कुकुरसँग यात्रा गर्दै - तपाई के सोच्नु पर्छ
कुकुरसँग यात्रा गर्नु अघि
पालतू फार्मेसीका लागि सामग्री
कुकुरको सामानमा के छ?
यो राम्रो तरिकाले सुत्ने परिवार छुट्टीमा छ किनकी, तर के प्रिय प्रेमिका संग के गर्न को लागी? यो साथी, रिश्तेदार वा कुत्ते केनेल मार्फत सट्टा ठूलो यात्रा मा साथ कुक लिन को लागी अधिक र अधिक लोकप्रिय हुँदैछ। तर कुकुरको साथ यात्रा गर्दा धेरै कुरा सोच्नु पर्छ!
सबै पछि, धेरै कुकुरहरू परिवारको पुरा तरिकाले एकीकृत सदस्य हुन्। प्रत्येक दोस्रो परिवारको बारेमा वार्षिक कुकुरको छुट्टी बनाउने योजना बनाइन्छ, जसले संगठन र योजनाको लागि धेरै थप गर्दछ। तपाईलाई ध्यान दिनुपर्छ र के गर्नु पर्छ र छुट्नु अघि स्पष्ट छ, तपाई यहाँ पत्ता लगाउनुहुनेछ।
यदि कसैले विदेशी देशहरूमा छुट्टीमा चार-लिङ्ग भएका साथीको परिचित कम्पनी छोड्न चाहँदैनन्, कसैले पहिला उपयुक्त स्थानको बारे सोच्नु पर्छ। सबै देशहरू यहाँ योग्य छैनन्। त्यसो कि मानिस मात्र होइन, तर कुकुरले पूर्णतया छुट्टीको आनन्द लिन सक्दछ, तपाईले सबै सहभागीहरूको व्यक्तिगत आवश्यकताहरुसँग व्यवहार गर्नु पर्छ।
कुत्तहरुको लागि, यो धेरै सुन्दर छ जब यो यति तातो र आर्द्र छैन। यसबाहेक, त्यहाँ छाया हुनुपर्छ र कुकुरलाई छुट्टी घर वा अपार्टमेन्टको अन्धकार कुनामा रिटायर गर्ने अवसर दिनुपर्छ।
के तपाईं होटलमा बिदा लिन चाहानुहुन्छ भने सिधै सोध्नुहोस् कि यदि कुत्तों होटलमा सबै अनुमति छ। अक्सर, तथापि, यो सानो शुल्कको लागि सम्भव छ।
तपाईंले देशमा थप ध्यान दिनुपर्छ। के त्यहाँ कुकुर अनुमति छ? कुकुरको निर्देशनको लागि कस्ता नियमहरू त्यहाँ लागू हुन्छ? यात्रा कसरी हुन्छ - कार, रेल वा यहाँ सम्म कि विमान द्वारा?
बेवास्ता नगरिएको छैन प्रवेश आवश्यकताहरुत्यो देशबाट देशमा भिन्न हुन सक्छ। जानकारी यहाँ मुख्य रूपमा हवाईअड्डाहरु (यदि विमान द्वारा यात्रा तिरिएको छ) वा सम्बन्धित विदेश कार्यालयमा भेट्टाउन सकिन्छ। उदाहरणका लागि, कुकुरलाई कम से कम6हप्ता पहिले राइईज विरुद्ध विदेशमा यात्रा गर्दा टीका हुनु पर्दछ, पछि फिर्ती पासपोर्टमा हुनुपर्छ।
लामो समयदेखि छुट्टीको सुरुवातको सुरुवात अघि केही हफ्ते, तपाईले आफ्नो फर नाक आफ्नो पशु चिकित्सकमा प्रस्तुत गर्नुपर्दछ र एक व्यापक जाँच अप गुनासो गर्नु पर्छ। यदि क्यासिनोहरू अझै छुट्टी देशमा प्रविष्टि आवश्यकताहरू अनुसार आवश्यक छ भने, पछि तुरुन्तै तपाइँको भाइरलसँग कुराकानी गर्नुहोस्।
एक राम्रो पशु चिकित्सकले त्यसपछि गन्तव्यमा गन्तब्य / गन्तव्यमा कुनै पनि खतरामा वार्तालाप गर्नेछ र कुनै पनि मामलाको घटनामा कस्ता सावधानीहरू लिन सकिन्छ भनेर व्याख्या गर्नेछ।
विशेष गरी जनावरहरू विदेशमा बिरामीहरू खतरनाक हुन्छन् जसले जर्मनीमा कम सम्भावना हुने सम्भावना छ। लेशमैनियसिस, हार्दिक र ईरलिचियोसिस मच्छर र टिक-जन्मेका रोगहरू मात्र छन् जुन चाँडै मार्न सक्छ। यस सन्दर्भमा: बेवास्ता भन्दा राम्रो सावधानी।
जब प्याकेटिंग, यो एक सानो पालतू फार्मेसी एक साथ राखन को लागि पनि महत्त्वपूर्ण छ, जो न केवल आफ्नो कुत्ते को व्यक्तिगत दवाई शामिल छ, तर केहि केहि चीजहरु जुन छुट्टी मा अनुपलब्ध नहीं हो:
- छोटो बालीका कुकुरहरूको लागि सूर्य सुरक्षा
- तौलिए, धुंध पट्टी, बाँझ कम्पास
- चिन्ताहरू टिक्नुहोस्
आँखा र कान ड्रपहरू
- चारकोल ट्याबलेट
- गंतव्य मा पशु चिकित्सकहरु र पशु चिकित्सा क्लिनिकहरु को सूची
हो, मात्र होइन मानवलाई सामान चाहिन्छ। कुकुर, यदि आफ्नो सूटकेस मा जरूरी छैन भने, केहि छ कि उसले आराम र सुखी रहनको लागि आवश्यक छ। पहिले सिर्जना गरिएको चेकलिस्टको साथ तपाईंले सजिलै ट्रयाक राख्न सक्नुहुन्छ।
यहाँ महत्त्वपूर्ण - हाम्रो साथ मानिसहरू जस्तै कि छुट्टीमा नयाँ चीजहरू खोज्न चाहानुहुन्छ - चिन्ताजनक चीजहरू जुन कुकुरलाई थाहा छ र घरबाट माया गरिन्छ। यसले कुकुरलाई घरबाट राम्ररी महसुस गर्न सजिलो बनाउँछ।
कुकुरको सामानमा जब एक कुकुर संग यात्रा मुख्य रूपमा हो:
- सामान्य खाना, उपचार गर्दछ, चबाई हड्डिहरु
- खाना र पेय कटोरा
- कुत्ता टोकरी / तकिया / कम्पास
- रिजर्ट कूलिंग माट मा तापमान मा निर्भर गर्दछ
- यात्रा पानी को बोतल
- खिलौने / भरवां जनावरहरु
- अवकाश यात्रा फार्मेसी
- आवश्यक भएमा मंगलबार
- पट्टा, हार्नेस, कलर
- अपार्टमेन्ट / होटल र फोन नम्बरको ठेगानामा ठेगाना ट्याग
- Kotbeutel, कुत्ता सीटी
- यूरोपीय संघको पासपोर्ट
- दायित्व बीमा कागजातहरू
- पंजे, आँखा र कोट को हेरविचार
के तपाईंले सबै चीजको सोच्नुभएको छ ताकि तपाईंको कुकुरले तपाईलाई जस्तै नै छुट्टीमा धेरै महसुस गर्न सक्दछ? के चेकलिस्ट बन्द छ र कुत्ते ट्राफिक बक्स फ्लाइट सर्विसेज र पर्समा रहेको पासपोर्ट पासपोर्टमा मिलाएको छ?
त्यसोभए हामी तपाईंलाई एक कुकुर संग एक रोमाञ्चक र उत्कृष्ट अवकाश चाहन्छौं!
कुकुरको साथमा बच्चाको रंग रङ
हृदयको साथ पृष्ठ कुञ्जी रंग गर्नुहोस्
कुकुर कसरी प्यान्ट गर्ने?
पृष्ठ कुञ्जी रंग
पृष्ठ कुत्ता र पिल्ला रंग